राम गोपाल आशुतोष
कान्त होस् । पृष्ठभूमिमा बजिरहेको होस् स्वरसम्राट नारायणगोपाल गुर्बाचार्यका कालजयी आवाज –
पर्खी बसेँ आउला भनी मेरो उठ्ने पालो
या आजै र राती के देखेँ सपना मै मरी गएको.....
वा तिमी जुन रहरले ममा फुल्न आयौ ...
सोही परिवेशमा प्रेम÷यौनकथा पढ्दाको आनन्द ! त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रनु, आफ्ना विस्मृतिहरूमा बहनु । कल्पेर कुनै कालखण्डमा मनको अतिथि । अथवा प्रेमी वा प्रेमिका सम्झनु । घात वा प्रतिघात, विछोड वा मिलन !
काठमाडौँमा अचेल धेरै पुस्तक आएका छन् । धार फरकफरक । काव्य, गीत, गजल, कथा, उपन्यास, नियात्रा, निबन्ध, आत्मकथा जीवनी आदि । अब प्रभाव वा अनुगुञ्जनको आदि वा अन्त्य हुन्न । कवितामा गोपालप्रसाद रिमाललाई लेख्नेहरू, भूपिलाई छुने हरू, वैरागी काँइला वा ईश्वर बल्लभलाई आदर्श मान्नेहरू धैरै छन् । कथामा विपीलाई अनुवाद गर्न खोज्नेहरू, इन्द्रबहादुर राईलाई पछ्याउन खोज्ने हरू, गुरूप्रसादलाई पुनरलेखन गर्नेहरू, परशु प्रधान वा हृदयचन्द्रसिंह प्रधानका पदचापमा आफ्नो लेखनको भविष्य देख्नेहरू धेरै छन् । यो एब्जायटी अव् इन्फ्लुयन्स् हो । ह्यारोल्ड ब्लुम्सले यस मनोवैज्ञानिक प्रक्रियालाई प्रभावको चिन्ता भनेका छन् ।
हामीले अनुभूत गरेको तर स्वीकार नगरेको सत्य कि एउटा लेखकले अन्यको प्रभाव वा रस ग्रहण गर्छ । तर आपूmले ग्रहण गरेको प्रभावको आभास आम पाठक वा लेखकलाई नहोस् भन्ने हरेक युवा वा वृद्ध लेखकको मनोदशा हुन्छ । उसले भरपुर प्रयास पनि गर्न खोज्छ । तर अध्येयतालाई थाहा हुन्छ । नयाँ कथा पुरानालाई चिरेर निस्कन्छ । यसरी अध्ययन गर्दा एउटा दुर्घटनाको डर सधैँभरि रहन्छ । पुराना कथा वा काव्यमा रहेका विचलन वा विडम्बना नयाँमा पनि रहने ।
यस्तै अभिगुञ्जन या अनुगुञ्न वा प्रभावमा सिर्जित कथासञ्चयन हो तिर्खा । युवा आख्यानकार कृष्णपक्षको नवीनतम कथाकृति । कूल २३ थान कथाको यो यस सब्ग्रहभित्र स्वदेश र विदेशका कथाव्यथाहरू छन् । प्रेम र युद्ध, यौन र हिंसा, इतिहास र सभ्यता, देश र अर्थतन्त्र समाज र सामाजिक विडम्बना र दुर्घटना आदिको दस्तावेज हो यो कथासञ्चयन । तिर्खा समग्रमा प्रेममा यौन आदर्शको कथा हो । सबलपक्ष के हो भने विपी कोइरालामा जस्तै कथाकार कृष्णपक्षमा पनि राजनीति नियमग्रस्त सामाजिक वस्तु हो र साहित्य स्वच्छन्द वैयक्तिक तत्व हो भन्ने धारणा स्पष्ट छ । विपीको राजनीति र साहित्यिक व्यक्तित्व फरक छ । कृष्णपक्षमा पनि आर्थिक लाभ र कथालेखनको धेय फरक देखिएको छ । विपीले मानवमनका अन्तरनिहित सत्यहरू खोजी गरेर, अनुसन्धान गरेर सूक्ष्म हृदयका तर बलाई अध्ययन गरी कथामा प्रयोग गरे । कृष्णपक्षले आधुनिक वा उत्तर आधुनिक युवामनभित्र छिरेर उनीहरूको जीवनलाई खोतलेर प्रेम र यौनजीवनलाई उजागर गर्ने कोसिस गरेका छन् । विदेशी भूमि र जनजीवनलाई चपक्क टिपेर कथामा उन्ने प्रयास प्रशंसनीय छ ।
कथासञ्चयनको पहिलो कथा ।।।नूर एल लाइन’ इजरायल, सिरिया र प्यालेस्टाइनबीचको युद्धको कथा हो । भूमि, धर्म र जातीय अस्तित्वका लागि भएको द्वन्द्वले फैलाएको आतब्कबाट विश्वको कुनै पनि देश अछुतो रहने छैन भन्ने मूल उद्देश्य यस कथाको रहेको छ । यस कथाकी मूलपात्र नूरलाई मानव बमको रूपमा प्रयोग गरिएकी एक अभिशप्त देशभक्त प्यालेष्टिनी नागरिकका रूपमा चित्रण गरिएको छ । प्रेमको आदर्श र दर्शन यस कृतिको अर्को विशेषता हो । वास्तविक लेखक वा साहित्यकार पर म्परागत सामाजिक निषेधको विपक्षमा हुन्छन् । वेद वा ग्रन्थ वा विविध पक्षबाट प्रभावग्र हण गरेर सारसंक्षेपले यो कथासञ्चयन सजिएको छ । दोस्रो कथा ।।।अपरिभाषित’ प्रे म पढेपछि आम पाठकले यही अनुभूत गर्नेछन् । प्रविधि र सञ्चारको विकासले लेखक, कलाकार वा आरजेका प्रशंसक घटाइदियो । नत्र, आदर्श मान्ने र प्रशंसकका रूपमा उनीहरूप्रतिको अनुराग र आदर्श बयान गरिनसक्नुको हुन्थ्यो । पाठक र लेखकबीचको आदर्श र दर्शन अनि कलाको भाषा र भूगोल हुँदैन भन्ने सन्देश दिन कथाकार सफल देखिन्छन् । तेस्रो कथा ।।।तिर्खा’ एक्काईशौँ शताब्दीको नारीको प्रेम हो । मिडियाको शक्ति र दुरुपयोगदेखि कथाकी नारी पात्र प्रेमाको खुल्ला यौनधारणा र सम्बन्ध यो कथाको मूल कथावस्तु हो । पुरुषसत्तालाई लात हानेर पुरुषले भोग्दै र फाल्दै आएको नारीले पुरुषलाई भोग्दै फाल्दा कस्तो विपरित क्रिया हुन्छ भन्ने पुरुष मनोदशाको द्वन्द्वात्मक प्रस्तुति सघन छ । ।।।
अर्को मृत्युको कथा’ विदे शीभूमिमा श्रम खर्चिने र यो देशको अर्थतन्त्र धान्ने युवाको कथा हो । जसले प्र त्याक्रमणमा गरेको हत्याको सजाय मृत्यदण्ड पाउँछ । यो कथा पढेपछि पाठकको आँखामा आँशु अवश्य आउँछ । अरबीभूमिमा यस्ता घटना सामान्य हो ।
नेपाली साहित्यमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म आर्यहरूले एकछत्र राज्य गरेका छन् । उत्कृष्टदेखि भुईँफुट्टासम्मले इज्जत पाएका छन् । १२८ भाषाभाषिका यही ने पाली भाषाकै कारण दमित भएको आरोप गैर नेपालीभाषिहरूले लगाएका छन् । भाषिक र जातीय अहब्कार प्रायः नेपालीभाषिमा छ । आफ्नो जातिलाई उच्चकोटीको र तप र त्यागले मात्र अघि बढेको हो भन्ने बताउने प्रयास कथाकारले ।।।इसरत’ कथामार्पmत गरेका छन् । मुसलमान केटीको प्रेमप्रस्ताव अस्विकार गर्ने ।।।म’ पात्रले आफ्नो उद्दे श्य र लक्षका अघि उभिएकी मुसलमान इसरतलाई तगारो ठान्छन् । भित्र कतै गढेको प्रे मलाई मारेर उनी आदर्श पात्र बन्ने अ÷सफल प्रयास गर्छन् । ।।।पर्खालपारिको देश – इजरायल’ यस कथासञ्चयनको एक महत्वपूर्ण कथा हो । यसले प्रत्येक मानवीय संवे दनालाई छुन्छ । यसरी अध्ययन गर्दै जाँदा मृत्यु चिन्तन कथाकार कृष्णपक्षको रु चिको विषय हो कि भन्ने भान हुन्छ । मृत्यु र पराजयका विषयमा उनको दर्शन निकै प्र शंसनीय छ । उनी भन्छन्, ।।।पराजय र मृत्युका कथा नलेख्न आग्रह गर्नेहरूसँग एकदम असहमत छु ।’ हो पनि । अचेल प्रत्येक पाइलामा मृत्यु छ । जागिर या अन्य कामका सिलसिलामा बिहान सकुशल बाहिर गएको पतिपत्नी, विद्यालय वा कलेज गएका छो राछोरीको मृत्युको खबर कुन शीर्षकमा आउने हो थाहा नै हुँदैन । इजरायल र पालेस्टाइनको युद्धको शिकार निर्दोष बेरोजगार युवा भइरहेकामा कथाकार विक्षिप्त छन् । ।।।मनोरम वस्ती’ लेखकको सेल्फ पोट्रेट हो । आफ्नो लेखन आदर्श र शैली प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले सरल वा क्लिष्टबीचको द्वन्द्वात्मकता प्रस्तेत गरेका छन् । स्पष्ट लेख्ने कि कालजयी लेख्ने भन्ने द्वन्द्वात्मक कलाशैलीको दुई पात्रबीचको सम्बाद पढेपछि थाहा हुन्छ कथाकार दिगोपनमा विश्वास गर्छन् । सरलताको वकालत गर्ने कथित सर लवादी मनोरम वस्तीजस्ता लेखकको भविश्य सुनिश्चित नभएको ठहर उनी गर्दछन् ।
विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा अहिलेसम्म १७ औँ शताब्दीका कथा वा एकादेश शैलीका कथा पठनपाठन हुनु विडम्बना हो भन्ने कथाकार कृष्णपक्षको भाषा निकै सरल छ । काव्यात्मक कथा भन्ने उनको शैलीले पाठकको मन छुने छ । आँशु, हाँसो, अनुभव र भोगाइका अनेक जब्घार तरेपछि उनी कवि बनेका हुन् । प्रत्येक जीवनको आफ्नै दृष्टिकोण र दर्शन हुन्छन् । एकै आदर्श र उद्देश्य भएका राजनीतिक पार्टीभित्र पनि मतभेद हुन्छ । सत्यको धरातल सबैको एकै हुन्न । फरक हुन्छ । यस कथासञ्चयनको अर्को विशेषता भन्नु रुने र हाँस्ने, दुख्ने र पीडा भोग्ने सबै हामी नै हौँ । पसिनाको खेती गर्नेहरूको हो । विदेशमा श्रम बेच्न अभिशप्त नेपाली युवाहरूको हो । सपना देख्ने तर सपना हराएका विपन्न वर्गको हो । के ही यथार्थ र केही कल्पनाजस्ता लाग्ने सत्य बुन्ने कृष्णपक्षले खडा गरेका तमाम पात्र हामी नै हौँ । भोगेको दुःख र गुमाएको सपना हाम्रै हो । ईश्वरको तस्बिर, माइ लाइफ इज अ मिराकल, बा, रीत आदि कथा राम्रा छन् । औसत कथाले कथा परम्परारालाई नै धानेको छ । विपी कोइराला, सुवास घिसिब वा युधिर थापाका कथाका कथालाई आदर्श मानेजस्ता लाग्नेलाई तिर्खाभित्रका कथाले तिर्खा मेट्ने छन् । यदि उत्तरआधुनिक साहित्यका जनक ज्याक्स डेरिडाले झैँ टेक्स्टलाई
टुक्राटुक्रा पार्ने र टेक्ट बाहिर होइन भित्र पसेर पढ्ने हो भने कृष्णपक्षका कथा औसत लाग्ने छन ।
हार्दिक श्रदान्जली ब्यक्त गर्दछौ
किन गुमनाम छन नेता विजयकुमार गच्छदार ?
गाईघाट(दिक्तेल सडक छ महिना बन्द हुने
नेकपा ! ए.. कता ?
हावाहुरीबाट ज्यान गुमाएको परिवारलाई १ लाख राहत
मेगा बैैंक : कर्जा कमिसनको प्रकरण
प्रदेश नम्बर १ मा सात सय चालक कारवाहीमा
हुरी,असनिको क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने ?मेयर राई